कतारपछि दुबईमा नेपालको हरियो तरकारी बेच्दै कल्याण | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← सुदुरपश्चिमेली नेपाली समाज कुवेतको सांस्कृतिक कार्यक्रमको लागि कलाकारहरु कुबेत आईपुगे।
अंगीकृत लिने बर्सेनि बढ्दै →
Posted on 19/09/2019 by कुवेतनेपाल एडमिन | टिप्पणी छोड्नुहोस्
२ असोज, काठमाडौं । व्यक्तिगत पहलमा नेपाली तरकारी र फलफूलको दुबईमा बिक्री सुरु भएको छ । काठमाडौंबाट कतारको दोहामा हरियो तरकारीको व्यापार गर्दै आएका व्यवसायी कल्याण घिमिरेले दुबईमा पनि निर्यात थालेका हुन् । नेपालबाट पहिलोपटक दुबईको सफारी मलका लागि ३२ सय किलो फलफूल तथा तरकारी गत सेप्टेम्बर ४ मा उडाइएको घिमिरेले जानकारी दिए । यस्तै, सेप्टेम्बर १० मा १७ सय किलो हरियो तरकारी तथा फलफूल उनले दुबई पठाए । हरेक साताको मंगलबार वा बुधबार नेपालबाट दुवईका लागि तरकारी तथा फलफूल पठाउने गरिएको छ ।
दुबईमा डल्ले खुर्सानी, तामा, टाटेसिमी, लौका, करेला, कांक्रो, मुला, घिउसिमी, लाम्चो खुर्सानी र हरियो मकै अहिले पठाइँदै आएको छ । व्यवसायी घिमिरेका अनुसार डल्ले खुर्सानीको मूल्य प्रतिकिलो दुबईमा २५ दिराम पर्छ । यस्तै तामा १८ दिराम र टाटेसिमिको मूल्य ७ दिराम तोकिएको छ ।
दुबईको सफारी मलमा नेपालबाट आएको गुन्द्रुकको प्रतिकिलो औसत मूल्य ३५ दिराम, हरियो खुर्सानी प्रतिकिलो ११, करेला १०, घिउसिमी १२, सेतो मुला १२, र काँक्रोको मूल्य १० दिराम छ । दुबईमा नेपाली फलफूल तथा तरकारीको माग बढेको घिमिरेको भनाइ छ ।
फिल्म फ्लप भएर के भो ? कतारमा गुन्द्रुक बिक्न थाल्यो !
हाल सफारी मलमा मात्रै बिक्री भइरहेको तरकारी तथा फलफूल त्यहाँँको स्थानीय बजारमा बिक्री–वितरणका लागि थप गृहकार्य भइरहेको घिमिरे बताउँछन् ।
तत्कालका लागि ती गन्तव्यहरुमा भएको तरकारीको व्यापार नाफाका लागि भन्दा पनि बजार हिस्सा ओगट्न र स्वादमा बानी पार्नका लागि मात्रै भएको उनले बताए ।
नेपालबाट तरकारीहरु आफूले लैजान थालेपछि दुबईका मलहरुमा हर्लिक्सको बट्टामा राखेर लगिएको डल्ले खुर्सानी सस्तोमा बिक्री गरिएको भन्दै घिमिरेले चित्त दुखाए ।
‘दुबईमा हरिया डल्ले खुर्सानीको माग अत्यधिक छ, प्रतिकिलो २५ दिराम पर्ने खुर्सानीलाई अवैध तरिकाले लगेर बिक्री थालिदिँदा अप्ठ्यारो हुन थालेको छ,’ घिमिरेले भने ।
घिमिरेले ‘अलसमन इन्टरनेसनल’ कम्पनी स्थापना गरी दुबईमा तरकारी व्यापार सुरु गरेका हुन् । सोही कम्पनीको नेपाल शाखा अलसमन इन्टरनेसनले नेपालमा उत्पादित हरियो तरकारी तथा फलफूल कतार र दुबई निर्यात गर्ने गर्दछ । बजारबाट संकलित तरकारी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा क्वारेन्टाइन परीक्षण पछि ती मुलुकमा पठाइन्छ ।(अन्लाईनखबर )